नेरुडे लघुवित्तको ५० हजार बढी कित्ता लिलामीमा राखिने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक समूहको ५० हजार कित्ता बढी सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ। संस्थाले यही पुस १६ गतेबाट संस्थापक समूहको ५२ हजार ७५० कित्ता सेयर लिलामीमा राख्न लागेको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलगायत अन्य इच्छुक व्यक्ति, फर्म कम्पनी तथा संगठित संस्थाहरुले बोलपत्र पेस गर्न...
मल्टीपर्पस फिनान्सले पुस १७ बाट साढे १७ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा बेच्ने, कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेड (वित्तीय संस्था) ले संस्था समूहको साढे १७ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। संस्थाले यही पुस १७ गतेबाट गत वर्ष असार २३ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएको १७ लाख ५९ हजार ६२१ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बेच्न लागेको हो। लिलामी सेयरमा कम्पनीका संस्थापक...
दुई कम्पनीमा रहेका एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको दुई कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वमा संस्थापक समूहको सेयर आज शुक्रबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वका संस्थापक समूहको कुल ३ लाख ३२ हजार ४६४ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरमा सूर्या लाइफको...
आजबाट प्रभु इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर लिलामीमा, क–कसले बोलपत्र पेस गर्न पाउने ?
काठमाण्डौ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थापक समूहको ७ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर आज मंगलबारबाट लिलामीमा राखेको छ। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ३२२ रुपैयाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताले बोलपत्र पेस न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ हजार कित्ता वा अधिकतममा १० अंकको...
आजबाट अपी पावरको साढे १३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले करिब साढे १३ लाख कित्ता सेयर आज सोमबारबाट लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले गत कात्तिक १४ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएका १३ लाख ४६ हजार २१८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको हो। कम्पनीले १ः०.४७ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६५ लाख...
भोलिबाट अपी पावरको साढे १३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले करिब साढे १३ लाख कित्ता सेयर आउँदो भोलि पुस ६ गतेबाट लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले गत कात्तिक १४ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रद बिक्री नभएका १३ लाख ४६ हजार २१८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने भएको हो। कम्पनीले १ः०.४७ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १००...
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको दुई कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वमा संस्थापक समूहको सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (सीआईटी) र नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वका संस्थापक समूहको कुल ३ लाख १६ हजार ८६६ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरमा...
आरएमडीसीको स्वामित्वमा रहेको फरवार्डको सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक समूहको सेयर लिलामीमा राखेको छ। आरएमडीसीको स्वामित्वमा रहेको फरवार्डको कुल ३ लाख ७५ हजार ३०७.५७ कित्ता संस्थापक समूहको सेयर लिलामीमा राखिएको छ। यो सेयरमा योग्य इच्छुक विद्यमान सेयरधनी वा...
अपी पावरको साढे १३ लाख कित्ता सेयर पुस ६ बाट लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले करिब साढे १३ लाख कित्ता सेयर आउँदो पुस ६ गतेबाट लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले गत कात्तिक १४ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रद बिक्री नभएका १३ लाख ४६ हजार २१८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने भएको हो। कम्पनीले १ः०.४७ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ...
प्राइम बैंकको नेरुडे लघुवित्तमा रहेको संस्थापक सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा आज बिहीबारबाट लिलामीमा राखिएको छ। नेरुडेले प्राइम बैंकको नाममा आफ्नो संस्थामा रहेको ८६ हजार ९०० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यसअघि संस्थामा रहेको प्राइम बैंकको १ लाख १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर खरिद गर्न संस्थापक...
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको दुई कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वमा संस्थापक समूहको सेयर आजबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (सीआईटी) र नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वका संस्थापक समूहको कुल ३ लाख २८ हजार २८६ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरमा सीआईटीको २...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको १.५ लाख कित्ता सेयर मंसिर २८ बाट लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मंसिर २८ गतेदेखि १ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक समूहको सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ। कम्पनीले लिलामीमा राख्ने संस्थापक समूहको सेयरमा योग्य जोकोही व्यक्ति कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम १५ हजार वा अधिकतम १० अंकको...
अपी पावरको साढे १३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको करिब साढे १३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने भएको छ। कम्पनीले गत कात्तिक १४ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रद बिक्री नभएका १३ लाख ४६ हजार २१८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने भएको हो। कम्पनीले १ः०.४७ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६५ लाख ७० हजार...